Bir Ma Ahe - Gpedia, Your Encyclopedia
Bir Ma Ahe (ingiriis: Nonmetal) waa curiye kimiko kuwaas oo leh calaamado iyo astaamo ka duwan kuwa birta. Sida caadiga ah, curiyaha bir ma ahe waxaa lagu yaqaanaa waa kuwo si fudud u uumi baxa, si fudud loo kala jabin karo, iyo in aanay gudbinin kulka iyo korontada. Waxa sidoo kale lagu yaqaanaa curiyaha bir ma ahe markuu la falgalo walax kale inuu soo sii daayo awood ion aad u sareeysa, isla markaana ku daro ama la wadaago elektaroono curiyaha kale ama isku dhiska uu la falgalaayo.
Si kastaba ha ahaatee, toban-iyo-todoba (17) curiye ayaa loo aqoonsadey bir ma ahe kuwaas oo inta ugu badan tahay neefo kala ah: Haydarojiin (H),Hiliyaam (He), Nitrojiin (N), Ogsajiin (O), Foloriin (F), Niyoon (Ne), Koloriin (Cl), Aargon (Ar), Kiribtoon (Kr), Siinoon (Xe) iyo curiyaha radioactiveka ah Raadhoon (Rn); hal curiye oo bir ma ahe ahi waa dareere Boromiin (Br); iyo xoogaa curiye adke ah sida Kaarboon (K), Fosforos (P), Salfar (S), Seleniyaam (Se), iyo Aaydhiin (I).
Curiyayaasha Bir ma ahe waxay inta u badan ku kala jiraa khaanado ka mid ah guruubka 14aad, guruubka 15aad ama Biniktojiin (Pnictogen), Jaalkojiin (Chalcogen), Guruubka 17aad ama Halogens, iyo Guruubka 18aad ama Neefta Gobta.
In kastoo curiyaha birta shan-jeer laab ka badan yahay curiyaha bir ma ahe, labo ka mid ah bir ma ahe - Haydarojiin iyo Ogsajiinta - ayaa waxay yihiin boqolkiiba sagaal-iyo-sagaashan (99%) Koonka muuqda; iyo hal curiye bir ma ahe ah, waa Ogsajiinta, ayaa waxay tahay in ku dhow 50% samayska qolofka dhulka, badaha iyo cirka dhulka. Intaas waxaa dheer, jidhka noolaha dhammaantiis wuxuu ka samaysan yahay bir ma ahe iyo isku dhisyo ka samaysan bir ma ahe.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bir_Ma_Ahe&oldid=160431"